Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » I-Kirk Ziehm yonyule i-CEO entsha ye-Buildout
UBuoutout, inkokeli kwi-automation yokuthengisa ye-CRE, uqeshe uKirk Ziehm njenge-CEO yenkampani entsha. Inkokeli eguqukayo nenamava, uKirk uza kuzisa irekhodi elimiselweyo leminyaka engama-20 + yobunkokheli obukhethekileyo, ulawulo lwemisebenzi kunye nokugxila ngobuchule ekuqhubeni ngempumelelo Amanyathelo amatsha kunye nokukhula.
Ngaphambili, uKirk wayebambe iindima zobunkokeli eziphezulu kubakhokeli betekhnoloji kubandakanya iZego (Inikwe amandla yiPayLease), iSeatGeek, kunye neCvent. Kutshanje, iKirk yayiyi-COO yeZego (Inikwe amandla yiPayLease), inkampani yetekhnoloji yepropathi enceda abaqhubi ukuba baphucule amava abo abahlali kunye nokunyusa ukugcinwa.
"I-Buildout inembali etyebileyo yokusebenzela uluntu lwentengiso kurhwebo," utshilo uZiehm. “Ndijonge ukusebenza neqela lethu elinetalente ukuqhubeka nokuhambisa kunye nokuphucula izisombululo zethu zeklasi kwinqanaba le-CRE elijongene nobomi. Ukusuka kwintengiso ukuya kwiCRM ukuya kwi-backoffice - iNorth Star yethu yenza abathengi bethu abamangalisayo ukuba bavale izivumelwano ezininzi, babonakale ngakumbi kwimibutho yabo kwaye bafikelele kwidatha engcono kwiimarike zabo. ”
U-Kris Krisco, iGosa eliyiNtloko laBathengi kunye noMsunguli we-Buildout, uthe, “sonwabile kwaye sinethamsanqa lokuba ne-Kirk kwiqela lethu. Amava akhe akhokelayo, okwenza ngcono kunye nokukhulisa imisebenzi iya kuba yinto ephambili kwimpumelelo eqhubekayo yabathengi kunye namava. Ikamva eliqaqambileyo kubarhwebi! ”